How'd it happen and more reports?: ဘယ်လိုလူတွေ လာပြီးရင်းရဲကျပါမလဲ?
မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမူ နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မူနှင့် နိုင်ငံတကာ၏ အထောက်အပံ့ စသည်တို့နှင့် ပက်သက်သော (NESAC) ဆိုသည့် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို နေပြည်တော်တွင် သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ MICC II မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ NESAC ဆိုသည်မှာ National Economic and Social Advisory Council ပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုပွဲအခမ်းအနားမှာ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယ သမ္မတ ဦးဥာဏ်ထွန်းမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် Dr.Ha Joon Change မှ ဦဆောင် ဆွေးနွေးသူ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ Dr.Ha Joon Change သည် Kicking Away the Ladder နှင့် Bad Samaritans: The Myth of free Trade and the Secret History of Capitalism တို့ အပါအဝင် ဆုရစာအုပ်များကို ရေးသားခဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
NESAC ဆွေးနွေးပွဲမှ ရလဒ်
National Economic and Social Advisory Council ဆိုတဲ့ NESAC ဆွေးနွေးပွဲမှ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မူအတွက် ရလဒ်ကောင်းတွေကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မူ နှောင့်နှေးရတဲ့ အကြောင်းများကို NESAC ဆွေးနွေးပွဲမှ များစွာပင် ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့ ဆင်းရဲမူတွေ မပျောက်တာလည်း ဘာဖြစ်လို့ ဖွံဖြိုးမူတွေ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေလောက် မမြန်ဆန်တာလည်း ဆိုတာကို NESAC ဆွေးနွေးပွဲမှ ကောင်းမွန်သော အကြံပေးချက်တွေကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မူ အတွက် အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မူ ပြုလုပ်သင့် မသင့်ဆိုတာများကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကောင်းမွန်တိကျသော အဖြေတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် အခြေအနေတစ်ခု ထိတော့ မရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဆင်းရဲမူတွေကို မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ထိရောက်စွာ မဖြေရှင်းနိုင် သေးတာကိုလည်း ဝေဖန်ထောက်ပြ ခဲ့ပါတယ်။
NESAC ဆွေးနွေးပွဲဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အနာဂတ် စီးပွားရေး တိုးတက်မူအတွက် အထောက်အကူ ပြုစေမယ့် ပွဲတစ်ခု ဆိုသော်လည်း ကောင်းမွန်သော ထွက်ပေါက်တစ်ခု ဆီကို ရောက်ရှိအောင် မဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်လည်း NESAC ကဲ့သို့သော် ဆွေးနွေးပွဲများကို မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံဖြိုးတက်ရေး ဆင်းရဲမူ ပပျောက်ရေးအတွက် မကြာမကြာ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
တကယ်တန်းအမိမြေမှာလာပြီး စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြှပ်နှံရမှာ အများကြီးစွန့်စားရမှာမို့ ကြောက်နေတာပါ၊ မတည်ငြိမ်သေးတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ ခဏာခဏာပြောင်းလဲတတ်တဲ့ ဥပဒေ၊ နိုင်ငံတကာထက်ဈေးကြီးလွန်းနေ တဲ့ မြေကြီးတွေ၊ အဆောက်အဦလေးတွေ၊ တကယ်ကျွှမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေမလုံလောက်တာရယ်၊ စပ်မှုဇုံကစက်ရုံတွေအတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလေးတွေ လုံလောက်စွာ မပေးနိုင်တာတွေကြောင့် နိုင်ငံတကာက စိတ်ဝင်စားမှုဘဲရှိပြီးစွန့်စားပြီးလာရောက် မရင်းရဲကျပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အောက်က Business World က မြန်မာပြည်ကိုစီးပွားရေးကို စစ်တမ်း ကောက်ထားတဲ့ နှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့အချက်အလက်လေးတွေကို ကြည့်လိုက်ရင်ဘဲ သင်တို့ နားလည် သဘောပေါက်လာမှာပါ၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၄ထိဘာဆိုဘာမှာ သိသိတာတာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာခြင်းမရှိတာကို သင်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်၊ လူထုတွေတအားမျှော်လင့် တကြီး စောင့်မျှော်နေပြီး! အမိမြေကမြေကြီးဈေးတွေ မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင် အဆပေါင်း ၄၀၀~၁၀၀၀ ကျော်လောက်ကိုဈေးတွေ မတရားထိုးတက်သွားတာကိုက ဘေးပတ်လည်နိုင်ငံတွေက နိုင်ငံရေး ကစားကွက်တွေလား၊ တောထဲကနှင့် မြို့ပေါ်က လူတစုတွေရဲ့ ငွေမဲကိုငွေဖြူဖော်နေကတာလား ဆိုတာကိုသင်တို့ရဲ့ဥဏ်ပညာနှင့် စဉ်းစား တာကြည့်လုိုက်ကျပါတော့လို့....
၂၀၁၀ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ခုနှစ်ထိ အစိုးရသစ်လက်ထက် ၄နှစ်တာအချိန်တွင်းမှာ အများပြည်သူတွေ အမှန်တကယ် ပိုပြီးဆင်းရဲတာကိုလဲ သင်တို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်၊ တဖြေးဖြေးခြင်းတက်လာတဲ့ လူနေမှုစရိတ်တွေကို အများပြည်သူလူထုတွေ ပိုပြီးခါးစည်းစွာ ခံစားရုန်းကန်နေရတာကိုလဲ သင်တို့နေစဉ် မြင်တွေ့ရပါ လိမ့်မယ်....
42.38 41.72 0.66
182 182 No change
188 188 No change
=Doing Business reform making it easier to do business. =Doing Business reform making it more difficult to do business.Click here to see all reforms made by Myanmar.
Download economy profile for Myanmar
1428.8KB pdf file
Search for business laws and regulations in Myanmar
StartingaBusiness189
Dealing with Construction Permits150
Trading Across Borders113
new business density and number of newly
created firms with limited liability can be found at Entrepreneurship Database.
72.0 37.8 11.1
176.7 29.8 3.6
7,016.0 293.3 10.4
Obtain reference letter from the ward chief
Obtain criminal history from the township police station
1 day paid as part of company incorporation fees
Request temporary business incorporation certificate
1 day, simultaneous with previous procedure 1,000 Kyat application fee
1 day The cost of witnessing the signature of the memorandum and articles of association: 40,000 Kyat.
1 day 1 million kyat (registration fees) + 15,000 kyat (administrative fees) + 1,000 kyat (stamp duty)
Obtain temporary certificate of incorporation
Obtain the permanent incorporation certificate
2 months paid as part of company incorporation fees
Pay the stamp duties for the permanent incorporation certificate
1 day, simultaneous with previous procedure 200,000 Kyat
1 day 2,000 Kyat
Below isadetailed summary of the bureaucratic and legal hurdles faced by entrepreneurs wishing to incorporate and registeranew firm in Myanmar. It examines the procedures, time and cost involved in launchingacommercial or industrial firm with up to 50 employees and start-up capital of 10 times the economy's per-capita gross national income.
Compare Myanmar to 188 other economies.
Paid in Minimum Capital Requirement: MMK 50,000,000
Yangon is divided into4districts, and 33 townships. Each township is then divided intoacertain number of wards, which is the smallest administrative unit grouping several households or ‘each block’. The ‘ward chief’ providesaletter confirming the address of the new business.
After obtaining the reference letter from the ward, the relevant township police station signsaletter containing your criminal history.
On the first visit to the CRO at the Yangon DICA office, and after having obtained the letters from the ward and police station, the proposed name for the new business must be checked and cleared. There is an electronic database since October 2012 that makes it easier to check and to complete this procedure within the same day. The request is made and depending on the workload the check will be done in eitherafew minutes orafew hours at most, in the meantime the business owner or representative can wait in the office.
Once the name check is complete, the following documents are automatically generated based on the info provided on the application form and are checked for accuracy by the applicant:
o Application form (company name, list of directors with ID# and addresses, start-up capital, address)
o Memorandum of Association (for local company, only Burmese version is required, though for English there is alsoastandardized format available)
o Business plan of activities
o Photocopy of the family certificate for each director (includes dates of birth, relationship, occupation, ID#, ethnicity, citizenship, religion). This isastandard form which each family already has in possession.
o Pledge of directors (affidavit)
o Ward reference letter
o Criminal history letter from the township police station
The applicant checks the accuracy of the generated documents, and goes back to the directors to obtain their signatures on the memorandum and articles of association.
Payment of registration fees occurs at the accounts department in the same DICA building.
After making the payments, the applicant returns to the Company Registration Office to obtain the temporary certificate, which is generated automatically. It needs to be reviewed and signed by the Assistant Director and the Deputy Director of the CRO. This can be done in 1 day if all is ready and the directors are available, but usually takesafew more days. This temporary certificate allows entrepreneurs to begin operating the business immediately while waiting for the permanent certificate, and is valid for6months.
The Company Registration Office will carry out internal reviews in order to issue the permanent incorporation certificate. The file is sent to the Ministry of Home Affairs, where it is checked by the Bureau of Special Investigations (BSI) and the Police. The applicant is informed by the DICA when the definitive certificate is ready to be picked up. The applicant can follow up by phone on the status of the application. The certificate is valid for5years.
Before going back to pick up the permanent incorporation certificate, the applicant pays stamp duty on the Articles of Association, which must be shown at the DICA.
Posted by ASNGROUP MYANMAR at Thursday, September 04, 2014